January 4, 2020 - ThutaSone
များစွာဂုဏ်ယူပါသည် အဂ္ဂနှစ်ထပ်ကွမ်း “နာမည်ကျော် မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော်”
January 4, 2020 ThutaSone 0
များစွာဂုဏ်ယူပါသည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်( ၁/ ၂၀၂၀) “အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ”ဘွဲ့ “နာမည်ကျော် မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော်” ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကောဝိဒတက္ကသီလဟိတဓရဂုဏ်ထူးဆောင်ဆရာတော် *၂ နှစ်ဆက်တိုက် ထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံတော် ဘွဲ့တံဆိပ် ရရှိသည့်ဆရာတော် ။ ၂၀၁၉~ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက ဘွဲ့ ၂၀၂၀~ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘွဲ့ ( အဂ္ဂနှစ်ထပ်ကွမ်း) ကျန်းမာချမ်းသာစွာ […]
”ပြည်သူ့အချစ်တော် တေးသံရှင် စိုင်းဆိုင်မောဝ် ကျန်းမာလာပါပြီ”…
ပြည်သူ့ အချစ်တော် တေးသံရှင် စိုင်းဆိုင်မောဝ် ကျန်းမာလာသည့်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ အကုန်သိ အနုပညာ ပြည်သူအချစ်တော် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကြီး တေးသံရှင် စိုင်းဆိုင်မောဝ် ကျန်းမာလာပြီဖြစ်ကြောင်း Shells Music Band & Entertainment မှ Shells Ko က ၄င်း၏ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြလာသည်။ ” […]
ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုဒ်မှာ Wheel chair နဲ့ ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါးကို ရုတ်တရက် ကြည့်မိတဲ့ အခါ
ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုဒ်မှာ အိမ်က လာခေါ်မယ့်ကားကို ထိုင်စောင့်ရင်း Wheel chair နဲ့ ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါးကို ရုတ်တရက် ကြည့်မိတဲ့ အခါမှာ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်အောက်မှ ခြေနင်းခုံက မကောင်းတော့ လည်ထွက်သွားပြီး ခြေဖဝါးက မြေကြီးနဲ့ထိနေတယ်။ အနောက်မှ လှည်းတွန်းတဲ့သူက မသိပဲ တွန်းလိုက်ရင် ခြေထောက်ညပ် […]
သိက္ခာသုံးပါးကို ဖြည့်ကျင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသစ်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ မိနစ်၂၀လောက် စောထလိုက်ပါ
အိပ်ရာမှ မိနစ် ၂၀ စောစောထပါ အထူးသဖြင့်သိက္ခာသုံးပါးကို ဖြည့်ကျင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသစ်ပြန်တည်ဆောက်ရမှာပါ။ သိက္ခာသုံးပါး တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ မနက်အိပ်ရာထ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးတဲ့အခါ တည်ဆောက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မနက်အိပ်ရာထစဆိုတော့ ဘာအာရုံမှမတွေ့သေးပါဘူး။ဒီတော့အာရုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်မဝင်သေးပါဘူး။ အကုသိုလ်ဝင်မလာသေးတဲ့အတွက်ိစိတ်ကလည်းကြည်လင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးရင် ဘုရားခန်းထဲတန်းဝင်လိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အလုပ်ကိုယ်စီရှိကြတဲ့အတွက်မအားကြပါဘူး။ မအားတဲ့ကြားထဲက အချိန်ယူဖို့ဆိုတာမလွယ်လှပါဘူး။ […]
သာသနာတော်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံး ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တ နန္ဒ္ဒမာလာဘိဝံသအားပေးအပ်ဆက်ကပ်
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသကို သာသနာတော်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံး ဘွဲ့တံဆိပ်တော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဆက်ကပ် ဂုဏ်အင်္ဂင်္ါ ၇ချက်နှင့် ပြည့်စုံသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ် နေပြည်တော်၊ဇန်နဝါရီ ၄ရက် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ကို သာသနာတော်ဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးဘွဲ့တံဆိပ်တော်ဖြစ်သည့်အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရုဘွဲ့တံဆိပ်တော်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ယနေ့တွင် ဆက်ကပ်ပါကြောင်းကြေညာလိုက်သည်။ […]
သုံးလသာခံတော့မယ်လို့သိခဲ့ပေမယ့် ကင်ဆာဆဲလ် လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ အသည်းကင်ဆာရှင် ဦးစိုးသန်းရဲ့ဆေးနည်း
သုံးလသာခံတော့မယ်လို့သိခဲ့ပေမယ့် ကင်ဆာဆဲလ် လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ အသည်းကင်ဆာရှင် ဦးစိုးသန်း မုံရွာမြို့နေ ဦးစိုးသန်းသည် အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလတွင် အသည်းကင်ဆာ ဝေဒနာကို စတင်ခံစားခဲ့ရရာ ဆရာဝန်များက သုံးလသာ ခံတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ငါးလအတွင်း ကင်ဆာဆဲလ် လုံးဝမတွေ့တော့ဘဲ သက်သာခဲ့သဖြင့် သူ၏ […]
ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုအကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ မေသန်းနု နေရာတွင် အကယ်ဒမီမျိုးသန္တာထွန်း တာဝန်ယူမည်
၂၀၂၀ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအတွက် ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုတွင် အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် အကယ်ဒမီ မေသန်းနု နေရာတွင် အကယ်ဒမီ မျိုးသန္တာထွန်းက အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဒါရိုက်တာ ဦးညီညီထွန်းလွင်က ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုကို ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးက လိမ်လည်မှု […]
”နှစ် ၁၆၀၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတွေ့ပြီ”
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အာရှတိုက်မှာ အလွန်ထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့တာပါ…အရင်ကဆို မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်.. အခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး…. အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆိုရင် အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေဟာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်…. ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက အာဖဂန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လောက်ထွန်းကားခဲ့လဲဆိုတာကို ယခုပြောပြမဲ့အဖြစ်အပျက်လေးက သက်သေတည်ခဲ့ပါတယ်… အဲတာကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀ […]
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားတစ်ဦးချင်းဆီတိုင်းဟာ ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစ တစ်ခုစီနဲ့ မွေးဖွားလာကြတာဖြစ်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ထဲ ရောက်ပြီး အရွယ်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ အစွမ်းအစဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရိပ်မှာ လောင်းရိပ်မိပြီး သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကမ္ဘာစစ်တမ်းတစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကလေးကို ငယ်ငယ်ထဲက ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲဆိုပြီး […]
သတိ…..အလောင်းတော်ကဿပ သို့ ဘုရားဖူးထွက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသူများ သတိပြုရန်
မိုးရွာ၍ အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးလမ်း ယာယီပိတ် မုံရွာ၊ဇန်နဝါရီ-၄ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ရွာသွန်းနေသော မိုးကြောင့် ယင်းမာပင်ခရိုင်ရှိ အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးတောင်တက်လမ်း ယာယီပိတ်ခဲ့ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကိုလင်း ကပြောသည်။ တောင်ခြေ ကပိုင်ရွာမှ တောင်တက်လမ်းမိုင် ၂၀ မြေသားလမ်းမှာ မိုးများလျင် လမ်းချော်မှုများဖြစ်တက်သဖြင့် ယာယီ […]